↑ "The Blind Side Box Office". Box Office Mojo. Retrieved 2010-06-05.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြယုဂ်တစ်ခုကို_ဆောင်ကြဉ်းခဲ့သူများ&oldid=231043" မှ ရယူရန်
အမေရိကန် ဒရမ်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ
အမေရိကန် ဘောလုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ
အားကစား ဒရမ်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ မတ် ၂၀၁၅၊ ၀၅:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။